Semalt: WordPress Child Theme - Sei & Sei Kugadzira
Muhupenyu chaihwo, vana ndivo inhaka yevabereki, uye vanogona kutaridzika tsika dzakanaka uye dzakaipa pamwe chete netsika dzevanhu vakuru. Panguva imwecheteyo, vane zvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana izvo amai vavo kana baba vavo vakavapa. Iwe unogona kutaura zvakafanana nemashoko e WordPress. Pamusoro pezvinhu zvose zveShokoPress zvaunotora, kutenga kana kuisa, kune chizvarwa chakagadzirirwa uye chakanyatsozivikanwa chinokodzera zvinangwa zvako zvakasiyana - feuille de paie exemple de demande.
Pano pane mhedziso inobva kuna Alexander Peresunko, nyanzvi yepamusoro Semalt , pamusoro pokuti sei uye sei kuumba zvidzidzo zvevana muShokoPress.
Sei kuumba iyo Child Theme:
Zvidzidzo zvevana zvinogona kudarika uye kugamuchira zvinyorwa, maitiro, uye maitiro emitambo yavo yemubereki. MuShokoPress, Child Theme iripo yakazvimiririra asi inobatanidza nemitambo yevabereki kuita sarudzo yakawanda yemabasa. Icho chinoenderana nemubereki uye chinogona kushandiswa chete kana mutambi wechibereki akaiswa uye achishanda pane yako WordPress site. Paunenge uchigadzira musoro wemwana, unofanirwa kuyeuka zvinhu zviviri zvikuru:
Unofanirwa kuwedzera mutsva wekutsvaga mune faira nezita remwana wako musoro.
Mifananidzo yepasita.css mumutauro mutsva inofanira kuiswa nemamwe mashoko e musoro.
Kana uchangobva kusika mwana, iwe uchaona kuti rine ruzivo rwakadaro semasikirwo evabereki vechiitiko. Chimwe chikonzero nei iwe uchida kugadzira zvidzidzo zvevana ndeyekuti vanotaurira WordPress iyo nyaya dzevabereki dzinofanirwa zvakakodzera kune mamwe mawebsite.
Nzira yekusika sei Mutambo Wevana:
Unogona nyore nyore kugadzira musoro wevana nekuchengeta mupfungwa pfungwa dzinotevera.
1. Wedzera gwaro idzva rekutsvaga uye Tungamira styles.css file
Nhanho yekutanga ndeyekuwedzera mutsva wechirangaridzo kune musoro wako uripo nezita remwana wako musoro uye kugadzirisa zvirongwa zvayo.Iyo danho rinokosha, uye haufaniri kuita chero chinhu kumatsetse .css faira kana iwe usingazivi kuigadzira.Iyo faira iripo muChikamu che Header che WordPress yako uye ine ruzivo rwakanangana nezveseiti yako, nzvimbo yako, uye zvarinotaura. rakagadziriswa nyore.Asi zvakadaro, kana iwe uchiziva chimwe chinhu pamusoro pezvinhu izvi zvinotambudza, unogona kuisa iyo code chaiyo mumusoro we musoro wehurukuro yako.
2. Kugadzirisa Musoro weVabereki
Unofanira kunyatsogadzirisa mhemberero yemubereki uye uzive zvose pamusoro pemitambo yayo paunenge uchigadzira dheti yemwana muShokoPress. Kutaura nokutendeseka, hapana maitiro akajeka, uye ndezvokuti mhemberero yemubereki inenge isina maitiro. Zvisinei, iwe unogona kuzvigadzirisa manyore uye kuongorora interwebs nemigumisiro yakanaka kubva kumwana wako musoro.
3. Kuwedzera mabasa.php file
Kana uri kutarisa kuwedzera faira functions.php kumwana wako musoro kuitira kuti zviite sezviri nani kupfuura kare, iwe unofanirwa kuisa imwe code uye kuronga zvigadziro zvehurukuro yako. Iye zvino tava kuziva zvatinofanira kuita nevana vedu zvidzidzo uye tinopisa. Chinhu chakanakisisa ndechekuti nyaya idzi dziri nyore kugadzira uye dzinogona kuchinja, kuiswa uye kuiswa chero nguva. Uyezve, unogona kuwedzera zvitsva kumusoro wemwana zvichienderana nezvaunoda, asi tinokukurudzira kuti urege kushandura chero chipi zvacho kana kuti shandura mamiriro ekugadzirisa musoro kwevana nekuda kwekushandiswa kwaro nekusarudzwa.
Zvinhu Zvitatu Zvokufadza Zvingaitwa Nevana Zvidzidzo
Iyezvino unoziva zvidzidzo zvemukomana wako musoro uye unogona kuita zvinhu zvinotevera zvinonakidza nazvo
1. Wedzera Zvitsva Zvitsva kuChimiro Chayo - Unogona nyore nyore kuwedzera zvitsva zvinoshandiswa kumashandisi ayo uye uchazviona zvichiwana zvinhu zvose kubva mumusoro wevabereki.
2. Wedzera New Type Type Templates - Kana wave uchishandisa WooCommerce, ungada kuwedzera tsika dzomutambo yemiti kumutambo wako wechidiki kuti upe kutarisa kwakanaka. Zvichengetedze kumutambo wechidiki unovimbisa kuti haungarasikirwi nekodzero apo musoro wevabereki unozvishandura pachako.
3. Kupfurikidza Izvo Zvinyorwa zveBhuku reMubereki - Unofanirwa kupfurikidza zvigadziri zvinyorwa mumitambo yemubereki. Imwe yenzira dzakanakisisa uye dzakanakisisa dzekuita izvozvi ndiko kukopa template kubva kumubereki ivo mumutambo wemwana uye kutanga kutarisa kubva ikoko.